July 23, 2021 Xuseen 11
Puntlandtimes (Muqdisho)-Waxaa socda loolankii ugu cuslaa ee loogu jiro kamid noqoshada xildhibaanada labada aqal ee barlamaanka Soomaaliya, xilli musharax walba doonayo inuu la soo boxo xildhibaan taageersan qorshihiisa siyaasadeed.
Dhinacyada ka soo horjeeda dib u doorashada madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ay wadaan qorshe xasaasi ah oo meesha looga saarayo xildhibaan walba oo taabacsan Villa Somalia iyo qorshaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markale kursigaan u hanqal taagaya hanashadiisa.
Dhankeeda Villa Somalia ayaa wadda qorshe ay galaangal xooggan ugu yeelanayso xildhibaanada ku soo baxaya kuraasta labada aqal gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya siiba deegaamada Puntland iyo jubbaland oo aan cilaaqaad wanaagsan la lahayn dowladda hadda jirta ee Soomaaliya.
Ilo wareedyo ka agdhaw xafiiska madaxweynaha ayaa xaqiijiyey in madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha sirdoonka NISA Fahad Yaasiin isla garteen in cadaadis xooggan la saaro dhammaan musharixiinta ka soo baxaysa magaalada Garbahaarey, waxaana tallaabooyinka la qaaday kamid ah inaan loo ogolaan ragga mucaaradka ku ah inay ka soo baxaan halkaasi iyadoo qaarkood looba diidey inay gaaraan magaaladaasi.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji Macaliow oo kamid ah ragga sida weyn ugu hanqal taagayey arrimaha doorashada gobolka Gedo ayaa loo diidey inuu ka duulo garoonka diyaaradaha Muqdisho kana dego magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo.
“Saakay waxaan aaday garoonka diyaaradaha anigoo u socda Garbahaarey, anoo dareemaya in la isoo celin doono, laakiin amarkii Ra’iisul Wasaaraha markuu baxay waxaa go’aan qaatay in aan qof la soo celin doonin, nasiib darro aniga iyo inta ila socotay waxaa nala yiri diyaarada ma raaci kartaan qolada diyaaradda ayaa lala soo hadlay, ninka amarkaas soo bixiyay waa C/llaahi Kulane, waxaan ku qanci karnaa Ra’iisul Wasaaraha inuu Kulane Jiis awoodda uu ku faanayo inuu ka qaado”ayuu yiri Macalimow.
@@@ Casilaadda Kullane-jiis/ shankaroortii hoobashada Farmaajo iyo hinqashada Somalia
Kullane-jiis: cumbuq cumbuq … cumbuq cumbuq … dhurruq-dhaylo xaar-dhamiijo. Kaaga darane, ma haysto geed uu sida dhurwaaga ku marto lugta milifta ah.
Qaade & Qarshe sow ma aha golaha fullinta iyo golaha shacabka?!
Afartii sano ee uu madax-weynaha ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dalka wuxuu galay khatar aad u weyn, wuxuuna ku dhowaaday inuu u gacan galo Itoobiya cadowga soo jireenka ah ee dadka Soomaaliyeed.
Kkkkk War dadku caqli yaraa Kulane wuxuu ku yimid nidaamka 4.5 mid kalaa imaanaya kii ka nixi lahaa isagay u taal 16 MP Axmed madoobe inuusan nijaasayn ayaa muhiim ah.
Rooble cadaalad ayaan ka sugaynaa Jamaal Maxamed Xasan Cabdi Cali Raage in ay si xor ah u tagaan Kismaayo iyo Garawe ayaa laga rabaa.
Boqolaal laga soo tarxiilay Kismaayo in guryahooda uu ku celiyo ayaa laga rabaa.
Farmaajo in dalka la iibsado ayuu diiday,in hotel lagu bedesho dalka ayuu diiday.
Farmaajo Zambia warashado kama gadan Cabdiwali Gaas
Faramajo Hotel kama dhisan Nairobi AU Gen Khaliif Ciise Mudan iyo Deni.
Farmaajo Emarate iyo Australia guryo kama dhisan addeer Faroole.
Farmaajo Hotel kama dhisan Mombasa Axmed madoobe.
Farmaajo 22 million laguma lahan Axmed madoobe.
Kee dalka qatar ku ah?
Haddii 4.5 wax lagu qaybsado waa qayb Daarood, marka, maxaa Mareexaan gaarka u siiyey? Cidna uma diiddana Mareexaan inay saamigooda qaataan laakiin waxaa la diiddan yahay guulwade najaas ah oo xitaa Mareexaan cabburinaya.
Dadka aad sheegtay inay hoteellada dhisteen markhaati uma haysid inay ka dhisteen xoolo dadweyne oo ay dhaceen. Haddii aan Farmaajo hoteello iyo warshado dhisan, ma hubtaa inaan naagtiisa iyo walaalihiis dhisan. Bakhtiga ma cunee fuudkiisaan cabbaa!
@ HANUUNIYE….. SXB WE APPROVE YOUR MESSAGES. RAG DHULKII IIBSADAY MAXAY SOMALI U SHEEGI KARAAN.
Somalidu wali ma ka quusan nin ay dhiig wadaagaan oo xil haya. Waligaa ma raadisey shaqsi aad tihiin dhiig wadaag hoose oo xil weyn ka haya meel ka mida somaliya?????. Mar baan raadgoobay nin aanu nahay ilma adeer Laxmi ah oo xil sare haya. Baadigoob ka dib waaxaan ku helay si saxariir leh. Run ahaantii waan ku farxay maqalka codkiisa, wayoo waxuu ahaa ilma adeernimada ka soko, saxiibkeey weyn oo mudo dheer ayaa iskugukeen dambeysey. Laakiin waxaan kala kulmay ma koobi karo oo waxay igu noqotay filanwaa. Mararka qaarkood waan la yaaba markaan arko rag u dagaalamaya ama naftooda u huraya nin shaqo tagay oo fakihaysanaya.
PS: Saxiibkey hadana ahaa walaalkey u ma raadin in aan ka helo hanti qaran. Arin kale oo somaliya khuseyn ayaan u baadigoobayey.
HANUUNIYE FARMAAJO WADANI MAAHA DAMBIGA UU GALAY CID GASHAY MA JIRTO.
1)QALBI DHAGAX AYUU DHIIBAY.
2)3 DEKEDOD U SAXIIXA ABIYE (SECRET).
3) DHOWR KUN CIYAL SOMALI DAGALKI TIGREE VS AMXAARO KU BAABI,IYAY.
4)DAMBIYADA AY GASHAY DOWLADDA FARMAAJO HAL QORAAL LAGUMA SOO KOOBI KARO.
@Waamo kkkkk cadayn nooma aadan keenin MASEYR ma fiicana.
1-Qalbi dhagax kkk dhagayso wareysiga Cabdi Xaashi,Shanbalooleshe.
Madaxweyne kaligii dalja6ma leh masuul kastaa shaqo ayuu leeyahay.Cabdi Xaashi wuxuu cadaynayaa in ay ahayd arrin laga shaqeeyay.
Mida kale waxaa heshiis la galay Ethiopia dawaladdii Xasan Sheekh JigJiga kusio dhaanteeyay HALKAAS BEEN AYAAD KU SHEEGTAY.
2-Aaaway 3 dekedood?Ethiopia iyo dal kaleba lacag kuma bixiyaan meel colaad ka jirto cayaalka adigoo kale ayaa lagu abaabulaa.
3-Cayaal maxaa u taqaan?Askartaas dawlad ayaa dirtay ma hayno cadayn cad oo sheegaysa in ay dagaal galeen ama kuvdhinteen.
BEENTA WAXAA LOO SHEEGAA DUMAR,CAYAALKA IYI JIRIGA AAN AQOONTA LAHAYN.
@A.Arar kkk waa qayb daarood,Mareexaan reer Diini reer Kooshin.
Ankee 4.5 ayaa kaa qaldan ankee reer Diinigaa ayaa habqaybsigaas leh waa in.
1-Boosaska la isu shaandheeyaa tusaale taliyaha police lageeyaa booska Kulane Jiise Gen Biixi la bedelaa etc.
2-Nidaanka 4.5 ayaa sal u ah waxqaybsiga Somalida.
Caburinta aad ka hadlaysaan maba aqaan Axmed madoobe iyo dabodhilifyadiisa wax ay sameeyaan iyaga maxaa uga hadliweseen?
Tarxiil,magaalada oo la tago dadka loo diido,dadka dayn inta laga qaato hadana la dilo,qof gurigiisii isagoo degan la leeyahay EEGGA adigaa yaqaan meelaad aado iiga bax,school la dhisayo oo la degaayo,hospital garage laga dhigaayo.
Jees,Morgan, Hiiraale ma samayn Caburin intaa ma ahan?
WAAN IDINKU RAACSANAHAY WIXII QALDAN IN LAGA QABTO UMMADDA IDINKU MA QABTAAN INTAAS.MAYA MA QABTAAN.
Hawiye ayaad wa kasheegtaan idinjaa ka xun.
Arrinta gobolka Gedo ma ahan wax fudud. Waa arrin ka mug weyn sida ay dadka u arkaan.
Gobolka Gedo waxay bafar zone u tahay Dawladda Itoobiya mana doonayaan in Gedo ka mid ahaato maamulka Jubbaland.
Labada gobol ee kale jubada hoose iyo jubada dhexe waxay hoos tagaan Dawladda Kiinya waxayna ka xigtaa dagaal in ay gacantooda ka baxdo.
Itoobiya iyo Kiinya waxay ku sigteyn in ay ku dagaalamaan Jubbaland laakiinse waxaa arrinkaas lagu qaboojiyey in Itoobiya loodaayo Gedo Labada gobol kalena Jubbaland ku egaadaan
Markay Mareexaan aragto ayey qaylisaa,Hoogayoo ba’ayeeyy ayey dhahdàa qaxbadda majeedheen.